Tantara iray Momba Ireo ‘Olona Tsy Fantatra Anarana izay Miaina, Mitia, Manohitra Sy Miady’ Ho An’i Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2016 12:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Français, русский, Italiano, Español
Leila Nachawati Rego. Sary natolotr'i Leila.
Naka teboka iray fiaingàna i Leila Nachawati Rego, Siriana-Galisiana mpanao gazety no sady mpikatroka, tamin'ny fitantaràna tantara hafa; ireny tantara tsy famakintsika, fijerintsika, na fihainontsika ireny.. Tototry ny ady mampijaly sy mandatsa-drà i Syria, iray amin'ireo firenena niaviany — sy tena andrian'ny fony, saingy mbola misy fitiavana sy fanoherana mipongatra any. Io finoana io, ankoatry ny zavatra hafa, no fototry ny tantarany voalohany “Cuando la revolución termine” (Fony Tapitra ny Revolisiona).
Tanaty imailaka iray i Leila (@leila_na) no niteny tamin'ny Global Voices, iray amin'ireo zavatra goavana iraiketan'ny fony ary irotsahany an-tsitrapo ho toy ny mpanoratra, momba ilay tantarany vaovao, literatiora, filazàna momba ny tena, ary ireo fahatsiarovany Damaskaosy iray hafa.
Global Voices (GV): Ahoana no iheveranao fa tantara iray mila tantaraina amin'ny alàlan'ny literatiora io fa tsy ny asa fanaovana gazety?
Leila Nachawati (LN): Eo am-panoratana lahatsoratra sy andrana momba an'i Siria sy ny Faritra Afovoany Atsinanana aho, ary arakaraky ny nandehanan'ny fotoana, no nahatsapako fa tsy dia misy mahatakatra loatra ny momba ilay faritra, fa amin'ny resaka finoana, ny maha-izy azy sy ny jeopolitika foana no andikàna azy. Heveriko fa ho betsaka kokoa ny olona ho tratran'ny tantara iray, ary izany dia hahatonga ny olona hiombona alahelo amin'ny vanim-potoana iray izay heveriny ho lavitra azy ireo, nefa raha ny marina dia akaiky kokoa tsy araka izay noheveriny. Hatreto, nasongadin'ireo fanehoam-pijery momba ilay tantara ny hoe i Siria talohan'ny 2011 no avoitra, ny fomba niainan'ny olona, ny zavatra nankahalainy, ny fomba famalifaliany tena, ary zavadehibe izany satria namboly fiombonana alahelo, izay zavatra tsy voatery mandrakariva ho azonao amin'ireo fandrakofana sy fandalinana avy amin'ny fampahalalana vaovao ho an'ny daholobe.
Cuando la revolución termine an”i Leila Nachawati Rego
GV: Sady resaka politika ny tantaranao, no tantaram-pitiavana ihany koa; fitiavana ny ankizy, ny namana, ny mpiara-miasa, ho an'ny firenena. Efa fotoana ela izao, ny hany tantara mba novakianay momba an'i Siria dia tantaranà horohoro, anganonganom-pahafatesana sy faharavàna. Inona no mbola tsy novakianay momba an'i Siria? Tantara hafa toa inona no mbola mila lazaina?
LN: Isanandro isika mamaky ireo tantara izay ny mpifanandrina dia ireo izay manimba an'i Siria (na io [Filoha Siriana] Assad na ISIS/Daesh) nefa kely no rentsika momba ireo izay manohitra, manorina ary manangana indray ny firenena, ao anaty vanimpotoana miha-sarotra. Ny tantara nosoratako dia fanomezana voninahitra ireny olona tsy fantatra anarana ireny, izay miaina, mitia, manohitra sy miady ho an'ny fireneny, hisian'ny fiarahamonina mendrika, na dia betsaka aza ny sakàna manjo azy ireo.
GV: Siriana-Galisiana ianao. Ahoana ny fifindrafindrànao eo anelanelan'ireo maha-ianao anao anankiroa ireo?
LN: Heveriko fa ny sasany amintsika izay mandany ny fiainany eo anelanelan'ny kolontsaina roa dia manana fomba fijery roa izay ahafahantsika ho lasa toy ny karazana tetezana iray, mpandikateny ho an'ny tontolo manodidina samihafa izay raha ny marina dia betsaka zavatra iraisany. Ilay “medium falifaly” noresahan'i Aristote.
GV: Lazao anay ireo fahatsiarovana anananao momba an'i Damaskaosy.
LN: Ho ahy, Damaskaosy dia feonà tsofa vy, fanorenana tsy mety mitsahatra, anjomaran'ireo fiara mihazakazaka amin'ny ora mahabe ny eny anaty fifamoivoizana, fofonà paoma roa shisha, tongolo nendasina tamin'ny dibera, voasary sy Jasmina. Tsiky sy topimason'ireo mahalala, fahanginana izay miteny betsaka noho ny kiakiaka, bitsika, ary fahafoanan'ny faniriana fanovàna.
Leila manondro sorabaventy iray mitaky ny hamotsorana an'ilay Siriana mpamorona rindrambaiko, Bassel Khartabil. Sary natolotr'i Leila.
GV: Vokatra manao ahoana teo amin'ny fiainanao no nentin'ny maha-ato anatin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices anao? Mpanoratra ato amin'ny GV ihany koa ilay mpandray anjara ao anatin'ny tantaranao.
LN: Nanamarika ny taloha sy ny taoriana teo amin'ny fiainako ny Global Voices, nahafahako nifanena taminà andian-taranaka mpikatroka izay nanokatra ny masoko ho amin'ireo tolona sy fanantenana hisian'ny fanovàna, ny rariny ara-sosialy, na eo an-toerana na manerana ny tany avy hatrany, mifototra amin'ireo tambajotra matanjaka itambaran'ny firaisankina sy ny fifamatorana niforona tsy nijerena akory izay fahasamihafana ara-kolontsaina. Ao anatin'ilay tantara, manamarika teboka iray manandanja amin'ny zotra nizoran'ilay mpandray anjara, izay miteny hoe, “Talohan'ny 2011, tamin'ireo diako rehetra nankany Siria, tsy mbola nifanena taminà mpikatroka aho na iray aza. Fa nanomboka teo, mety betsaka no fantatro.”